Ichi chidzidzo chinokuratidza maitiro ekuisa uye kugadzirisa Cacti network yekutarisa chishandiso kubva kunobva shuwa kuti iwe unowana yazvino vhezheni paDebian 9, codename Stretch.
Cacti ndeye web-based network yekutarisa chishandiso, yakavhurika sosi, yakagadzirirwa kuratidza network uye system giraidhi kuburikidza neRRDtool Iyo inoshandisa iyo SNMP (Nyore Network Management Protocol) protocol kuunganidza uye kuongorora network kubva kunetiweki zvishandiso, senge switch, ma routers, Linux, Unix uye Windows sevha kana mamwe marudzi enetiweki-based zvishandiso zvinotsigira SNMP
Debian 9 mashoma kuisirwa pamushini usina-simbi kana pane chaiyo yakavanzika server.
Iyo tuli IP kero yakagadzirirwa kune yako yeimwe system network network makadhi.
Kuwanikwa kweiyo midzi account kana mushandisi ane midzi account account kuburikidza nesudo.
Tisati tatanga kuisa Cacti kubva kunobva, tanga wavimbisa kuti yako sosi inosangana nezvose zvinodiwa software yekugadzira uye kuisa Cacti. Mune yekutanga danho, vhura iro reDebian zvinyorwa zvinyorwa faira yekugadzirisa pamwe nemidzi mvumo uye unongedze iyo inobatsira uye isiri-yemahara marekodhi sezvakaratidzwa mu pazasi faira Excerpt.
Source.list faira muenzaniso:
zvikwereti http://ftp.ro.debian.org/debian/ kutambanudza main batsira kwete-yemahara
deb-src http://ftp.ro.debian.org/debian/ akatambanudza main
deb http://security.debian.org/debian-security anotambanudza / kugadzirisa main batsira kwete-yemahara
deb-src http://security.debian.org/debian-security anotambanudza / kugadzirisa main
Mushure mekupedza kugadzira iyo faira, chengetedza uye uvhare iyo faira uye uvandudze yako system repositories uye software mapakeji kuti ubatanidze iwo matsva mapakeji, nekupa iyo iri pasi pemirairo.
Tevere, pisa mutemo mutsva kuitira kuti uise zvimwe zvinodiwa zvinoshandiswa izvo zvinoshandiswa kuenderera mberi nekutarisa yako system kubva kune yekuraira mutsara.
apt kuisa wget chigamba unzip zip bash-kupedzisa
Cacti iyi webhu-yakavakirwa yekutarisa yakanyorerwa zvakanyanya muIPP server-side programming mutauro. Kuti umhanye iyo Cacti php faira zvinyorwa, webhu sevha, seApache HTTP server, uye PHP mududziri inofanira kuiswa uye kushanda muhurongwa. Kuti uise Apache webhusaiti uye iyo inodudzira PHP padivi pamwe neese inodikanwa PHP modules inodiwa neCacti kuti imhanye mushe ,buritsa iwo unotevera kuraira mu server server yako.
apt kuisa apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-snmp php7.0-xml php7.0-mbstring php7.0-json php7.0-gd php7.0-gmp php7.0-phmpXppNXXppNXXppNXXppNXXppXLpXLpXLpXLpXLpXLpXLpXX
Mushure mokunge Apache uye PHP vakagadzirwa, edzai kana webhusaiti yakasimuka uye ichimhanya nekuteerera kwehutano hwehutano pahutachi 80 nekubudisa murairo unotevera nematauriro emidzi.
Zvikazo netstat network yekushandisa haina kuisirwa ne default pane yako Debian system, ita iri pasi apa kuti uiise.
zvakakodzera kuisa net-tools
Nekutarisa netstat mirairo kuburitsa iwe unogona kuona kuti apache daemon iri kuteerera kune inouya network yekubatana pachiteshi 80.
Kana iwe uine firewall inogadziriswa pane yako system, senge UFW firewall application, iwe unofanirwa kuwedzera mutemo mutsva kuti ubvumidze HTTP traffic kuti ipfuure nepawanowira nekupa iwo unotevera kuraira.
ufw inobvumira WWW
ufw inobvumira 80 / tcp
Chekupedzisira, edza kana Apache webhusaiti yewebhu default peji rewebhu rinogona kuratidzwa mu browser yemutengi wako nekushanyira yako Debian muchina IP kero kuburikidza neHTTP protocol, sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pazasi. Kana iwe usingazive yako IP muchina kero, chiuraya 'ifconfig ' kana 'ip a ' rairo. Yangu IP mune iyi seti ndeye: http: // 192.168.1.14
In inotevera chinhanho, tinoda kuita dzimwe shanduko kune PHP default gadziriso faira kuitira kuvimbisa kuti file_uploads kusiyanisa kunoita uye iyo PHP timezone kurongedza kwakarongedzwa zvakanaka uye kunoenderana yako system nzvimbo nzvimbo. Vhura /etc/php/7.0/apache2/php.ini faira rekugadzirisa uye simbisa kuti mitsara inotevera yakaiswa nenzira inotevera.
Date.timezone = Europe / London
Tsiva iyo nguva nguva ichichinjika zvinoenderana neyako nguva yekumberi nekubvunza runyorwa rwemitambo yakapihwa nePHP madhesi pane inotevera link http://php.net/manual/en/timezones.php
Mushure mekunge maita shanduko dzinodikanwa, gadzira faira ye php info uye dzorera zvakare apache daemon yekushandisa shanduko nekupa iyo inotevera mirairo.
systemctl zvinyorwa apache2
Tarisa kana iyo PHP nguva yakagadziriswa nenzira kwayo nekushanyira iyo php info script kubva kubhurawuza pane inotevera URL (sezviri kuratidzwa mumufananidzo pazasi). Dzvanya pasi kusvika nhasi kurongedza kuti uone php nguva yekuisa.
Cacti yekutarisa mudziyo inochengetera zvigadzirisheni uye yakaunganidzwa data mune reRBB database. Mune ino tutorial, tichagadzirisa Cacti naMariaDB database backend. Tungamira iri pasi apa yekumira yekuisa MariaDB dhatabheji uye iyo PHP module inodiwa kuwana mysql dhatabhesi.
apt kuisa mariadb-server php7.0-mysql
Mushure mekunge maisa MariaDB, simbisai kuti iyo daemon iri kumhanya uye inoteerera kune network yekubatanidza pane localhost, port 3306, nekumhanya netstat command.
Wobva wapinda muMySQL koni uye chengetedza MariaDB mudzi account nekupa iyo inotevera mirairo.
shandisa mysql; gadzirisa mushandisi set plugin = '' ipo mushandisi = 'mudzi'; runyararo ropafadzo; kubuda
Mune inhanho inotevera, chengetedza MariaDB nekuita script mysql_secure_installation yakapihwa neiyo yekuisa paki kubva kuDebian Stretch repository. Paunenge uchimhanya, script ichabvunza mibvunzo yakatevedzana kuchengetedza iyo MariaDB dhatabhesi, senge: kuchinja MySQL midzi password, kubvisa vashandisi vasingazivikanwe, kudzima kure midzi midzi uye kudzima bvunzo dhatabhesi. Kanda iyo script nekupa iri pazasi rekuraira uye ndokuvimbisa kuti unonyora hongu kumibvunzo yese yakabvunzwa kuitira kuti uchengetedze zvizere MySQL daemon. Shandisa pazasi script script kubuda kunze segwara.
Cherechedza: KUTAURA ZVOSE ZVINHU ZVENYAYA YOKUTSVA INOKWAKURIRWA KWOSE MariaDB
VASHANDI MUZVIMBO ZVOKUSHANDISA! TADZAI VERENGA ZVINHU ZVOSE ZVINOKOSHA!
Kuti upinde muMariaDB kuti uichengetedze, tinoda iyo iripo
password yemidzi midziyo. Kana iwe uchangoisa MariaDB, uye
hausati wamisa iyo password password, password ichave isina chinhu,
saka iwe unofanirwa kungovhara kupinda muno.
Zvakanaka, kubudirira kushandisa password, achifamba ...
Kugadzirisa midzi yephasiwedi kunovimbisa kuti hakuna munhu anogona kupinda muMariaDB
root user using the right authorization.
Iwe unotova ne password password yakaiswa, saka iwe unogona kupindura zvakachengeteka 'n'.
Shandura midzi yedemo? [Y / n] y
Dzorera zvakare password itsva:
Purogiramu inoshandiswa kubudirira
Kudzokororazve matafura eropafadzo ..
Nokusakwanisa, kuiswa kwaMariaDB kune munhu asingazivikanwi, anoshandisa chero munhu
kuti upinde muMariaDB pasina kuve nekodhi yekushandisa yakashandiswa
ivo. Izvi zvinongotarirwa chete kuongororwa, uye kugadzira kuiswa
enda zvishoma zvishoma. Iwe unofanira kuzvibvisa usati waenda kune a
Bvisa vashandisi vasingazivikanwe? [Y / n] y
Kazhinji, mudzi unofanirwa kubvumidzwa kuti ubatane kubva 'localhost'. Izvi
rinovimbisa kuti mumwe munhu haagoni kufungidzira pamusi wepwediki kubva kunhare.
Rega kudzivirira midzi kure? [Y / n] y
By default, MariaDB inouya ne database inonzi 'test' inogona chero munhu
access. Izvi zvinotarisirwawo chete kuongororwa, uye inofanira kubviswa
tisati taenda kunzvimbo yekugadzira.
Bvisa test database uye uwane nayo? [Y / n] y
- Kudonhedza bvunzo dhata…
- Kubvisa ropafadzo pane bvunzo dhata…
Kudzokororazve maropafadzo ematafura kuchaita kuti zvinhu zvose zvigadziridzwe kusvika ikozvino
inotanga kushanda pakarepo.
Kudzoserazve matafura eropafadzo zvino? [Y / n] y
Zvese zvakaitwa! Kana iwe wapedza ese matanho ari pamusoro, yako MariaDB
kuiswa kunofanira kunge ikozvino kwakachengeteka.
Ndinotenda nekushandisa MariaDB!
Kuti uedze MariaDB kuchengetedzeka, edza kupinda padhatabhesi kubva kuConsole ne mudzi pasiwedhi. Iko kuwanikwa kune database kunofanirwa kurambidzwa kana pasina password yakapihwa iyo mudzi account. Kana iyo password ikapihwa, iyo nzira yekukodha inofanirwa kupihwa MySQL koni, sezviri kuratidzwa mune pazasi skrini.
mysql -h localhost -u midzi
mysql -h localhost -u midzi--
Paunenge uchikanda muMariaDB dhatabhesi, enda mberi ugadzire dhatabhesi rekuisa kwaCacti uye gadzira mushandisi uyo uchazoshandiswa kutonga cacti database, nekupa iyo inotevera mirairo. Tsiva iyo cacti database yemushandisi uye password maererano.
gadzira database cacti; bvumidza ese pane cacti. * ' runyararo ropafadzo; kubuda
Zvakare, ipa mvumo yekusarudza kune cacti database yemushandisi weMySQL yenguva yenguva nekupa iyo iri pasi pemirairo. Ichi chinhu chitsva chinodiwa kuitira kuti ugone kuisa uye kumhanyisa kuburitswa kweCacti.
mysql -u mudzi -p mysql </usr/share/mysql/mysql_test_data_timezone.sql
mysql -u midzi -p -e 'sarudza sarudza panesql.time_zone_name to [email protected]'
Mune inhanho inotevera, vhura MySQL server default Confuction faira uye unongedzera mitsara inotevera sezvakaratidzwa mune iri pasi muenzaniso.
Wedzera mitsara inotevera pazasi pe 50-server.cnf faira:
max_heap_table_size = 98M tmp_table_size = 64M join_buffer_size = 64M innodb_buffer_pool_size = 485M innodb_doublewrite = kure innodb_additional_mem_pool_size = 80M innodb_flush_log_at_timeout = 3 innodb_read_io_threads = 32 innodb_write_io_threads = 16
Kuti ushandise shanduko dzese dzatakaita kusvika parizvino, tanga zvakare MySQL neApache daemons uye tarisa kuti madhaemoni ari kumhanya nekuburitsa mirairo inotevera.
systemctl zvinyorwa zvangu mysql apache2
systemctl chimiro mysql apache2
Gadzira SNMP Service
Cacti webhu yekutarisa sevhisi inoshandisa iyo SNMP protocol kuitira kuunganidza data data nehuwandu. Kuti uise iyo SNMP chirongwa, SNMP daemon service uye SNMP MIBS mune yako yemunharaunda Debian 9 system, bura unotevera kuraira uine midzi mikana.
kuisa app snmp snmpd snmp-mibs-downloader
Zvakare, isa indasitiri-yakajairika yekugonesa yedhiraivhi RRDtool, iyo inoshandiswa neCacti kuratidza kushanda kwemifananidzo.
apt kuisa rrdtool
Tevere, gadzirisa iyo SNMP yekugadzirisa faira /etc/snmp/snmp.conf uye tauramamoms ” mutsara nekuwedzera hashtag (#) pamberi pemutsara sezvakatsanangurwa mumufananidzo pazasi.
Gadzirisawo SNMP daemon iri kure uye yemunharaunda kuwana, nekuvhura iyo ymusic.conf filefor kugadzirisa uye kutsvaga uye kugadzirisa iyo pazasi mitsara seinotevera:
Kusunungura mutsetse kuti uteerere kubatana pane zvese zvinopesana
Wedzera mitsara inotevera kubvumira SNMP kubvunza kune yako yemunharaunda network kuburikidza ne snmp_string pasiwedhi. Chinja tambo yenharaunda ye snmp snmp_string password ne network yako CIDR kero maererano.
Nesarudzo, iwe unogona zvakare kugadzirisa iyo yekusangana uye nzvimbo inoshanduka kuitira kuti upe ruzivo nezve server yako. Iyi ruzivo inoratidzwa muCacti yekuzivisa nzvimbo kana iwe uchitarisa yako server seti. Zvakare, yako system hostname, kernel shanduro uye system uptime inoratidzwa muCacti yekuzivisa nzvimbo.
Kuti ugadzirise iyi ruzivo, chinja iyo wdcLacation uye sysContact mitsara iri pasi pechikamu cheruzivo system uye wedzera yako yakakoshesa. Nekutadza, tsika dzinotevera dzakagadzirirwa wdcLacation uye sysContact.
sysLocation Kugara padoko reBay sysContact Me <[email protected]>
Mushure mekunge maita shanduko dzakakodzera kuenda ymusic.conf faira, chengetedza uye uvhare iyo faira uye wotangazve snmp daemon kuratidza shanduko nekupa iri pasi apa mirairo. Wobva watarisa iyo snmpd daemon mamiriro uye ane zviteshi ports mune yekuteerera mamiriro.
Vhura firewall port kweSNMP:
ufw rega 161 / udp
Kuti uite chokwadi chekuti SNMP daemon iri kushanda sezvanga zvichitarisirwa uye ichitora yese SNMP kukosha pasi pemusoro weti yemostosta, mhanya iwoira pazasi.
snmpwalk -v 2c -c snmp_string inorehost memory
Cacti-Spine inotsiva iyo default cmd.php poller, yakanyorwa muC kuitira kukurumidza kuuraya nguva. Kuti ubatanidze uye nekuisa Cacti-Spine pooler kubva kune zvinyorwa muDebian 9, kutanga, ita zvinotevera kuraira kuitira kuti uise zvese zvinodiwa pasi muhurongwa.
apt kuisa anovakwa-yakakosha dos2unix dh-autoreconf rubatsiro2man libssl-dev libmysql ++ - de libmariadb-dev libmariadbclient-dev librrds-perl libsnmp-dev
Tevere, dhawunirodha yazvino vhezheni yeCacti-Spine tar yakamanikidzwa kuchengetedza ne wget shanduko, bvisa iyo tarball Archive uye pinda cacti-spine inobviswa dhairekitori nekupa iyo inotevera mirairo.
Iye zvino, unganidza uye gadza Cacti-Spine utility kubva kunowanikwa nekupa iri pasi apa mirairo.
Cacti-Spine ichaiswa mukati / usr / local / spine gwara system. Spine inokurudzira kuti uise iyo SUID zvishoma yemuzongoza binary kuti utsigire ICMP ping zvikumbiro.
chown midzi: mudzi / usr / yemuno / spine / bhini / musana
chmod + s / usr / local / spine / bhin / spine
Iwe unofanirwawo kubatanidza Spine kune cacti database nekugadzirisa iyo yekugadziriswa faira neinoratidzwa mune iri pazasi faira Excerpt.
musana.conf faira sampu. Dzosera zvirevo zvacho maererano. Shandisa iyo imwechete database zvinyorwa seyakagadzirirwa Cacti.
DB_Host localhost DB_Dhatabhesi cacti DB_User mushandisi_cacti DB_Pass pass_cacti DB_Port 3306 DB_PreG 0
Kuti ugokwanisa kuisa Cacti kubva kune zvinyorwa muDebian 9, kutanga, tora uye uburitse iyo yazvino vhezheni yeCacti tarball yakamanikidzwa Archive, wozotora mafaera ese abviswa kune apache web midzi nzira, nekupa iyo inotevera mirairo.
cp-cf cacti-1.1.24 / * / var / www / html /
Mune inhanho inotevera, vhura cacti gadziriso faira uye gadziridza mitsara inotevera kuratidza MySQL cacti dhatabhesi username, password, host uye URL nzira nenzira, sezvakaratidzwa mumuenzaniso pazasi.
Cacti config.php faira sampuli:
$ database_ssl = nhema;
Dzvanya pasi uye shandura nzira inochinja kubva "/ Cacti"Ku"/"
Tevere, iwe unofanirwa kuendesa cacti dhatabhesi nekuodha iyo kubat.sql script inowanikwa muwebhu server rako gwaro midzi uye simbisa cacti mysql matafura nekupa iri pasi apa mirairo.
mysql -u cacti_user cacti -p -e 'show tafura'
Pakupedzisira, usati watanga kuisa Cacti kubva pawebhu, gadzirisa iyo mirairo iri pazasi kuitira kuti ubvise iyo default index.html faira rakaiswa neApache web server, gadzira iyo faira reCacti uye bvumidza Apache run nguva yekushandisa ine yakazara yekunyora mvumo yeku cacti yekuisa nzira .
Kutanga kuisa Cacti kuburikidza newebhu interface nekushanyira yako system IP kero kana zita rezita kubva kubhurawuza uye kuvhura inotevera URL.
Pakutanga kutarisa zera Gamuchira GPL License Chibvumirano uye warova pane Inotevera bhatani kuti uenderere mberi sezvakaratidzwa pasi pazasi.
Pachiratidziro chinotevera, pusha pasi wobva waona kana zvese zvinodiwa nehurongwa zvakapfuudzwa nemusakisi uye wobva wadzvanya Next bhatani kuti uenderere mberi nemaitiro ekuisa.
Tevere, sarudza New Primary Server Server semhando yekuisa uye tinya pa Next bhatani kuenderera mberi.
Zvino tarisa kana nzvimbo dzese dzinokosha dzebhinari uye shanduro zvanyatsoonekwa neacacti simaki. Zvekare, iwe unofanirwa kugadzirisa Spine binary nzira kune / usr / local / spine / bhini / musana. Unogona kusarudza Classical theme wobva warova Next bhatani kuti uenderere mberi.
Pane rinotevera chidzitiro, iyo inosimudzira inozivisa Apache webhu midzi dhairekodhi mvumo kuitira kuti atarise kana webhu server ichibvumidzwa kuita inonyorera cacti yekuisa nzira. Kana nzira dzese dzinodiwa dzichinyorwa, rova ​​pane Inotevera bhatani kuti uenderere mberi.
Sarudza matemplate ese kubva pane yakapihwa runyorwa uye rova ​​pa Finish bhatani kuti upedze kuisirwa
Mushure mekunge mapedza basa rekuisa, pinda muCacti web interface neinotevera default humbowo uye kutsiva admin default password ne password nyowani yakasimba, sezviri kuratidzwa mune inotevera skrini.
Mushure mekupinda muCacti web interface, enda ku Console -> Kugadziridza -> Zvirongwa -> Poller uye shandura iyo poller mhando kubva cmd.php kusvika muzongoza binary, sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi. Gurudzira pasi uye rova ​​iyo Save bhatani rekushandisa shanduko.
Zvadaro enda ku Console -> Kugadziridza -> Zvirongwa -> Nzira uye kugadzirisa Cacti-Spine uye gadza gadziriro yefaira nzira munzira inotevera /usr/local/spine/etc/spine.conf uye rova ​​pane Sarudza bhatani kuti ushande kugadzirisa, sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
Kuti uwedzere mudziyo mutsva kutariswa kuburikidza neSNMP, enda kuna Console -> Management -> Midziyo ndokurova + icon, sezviri kuratidzwa mumufananidzo pazasi. Nezvinangwa zvekuratidzira, tinowedzera iwo localhost muchina kuti utariswe neCacti kuburikidza neSNMP protocol.
Kune ichangobva kuwedzerwa Linux chishandiso icho chinozoongororwa kuburikidza neSNMP, wedzera tsananguro yeiyo mudziyo, iyo hostname, FQDN kana IP kero yeyakaongororwa mudziyo uye sarudza Local Linux Machine seyisiyisi template. Mune SNMP sarudzo, sarudza yakakodzera SNMP Version (mune iyi kesi isu toshandisa iyo 2) uye nyora yako kifaa SNMP nharaunda tambo, sekutsanangurwa kwazvino mifananidzo. Pane iyo SNMP doko haina kuchinjwa, siya kukosha kwechiteshi sezvazviri uye, kana wapedza, dzikisa pasi ndokurova paGadzira bhatani kuti uwedzere chishandiso kuCacti database kuitira kuti itariswe.
Mushure mekunge mudziyo wawedzerwa kuCacti dura, ipfupiso yeSNMP inozoratidzwa pamusoro pe peji rechishandiso kana chishandiso chakawanikwa zvakanaka ndokundwa. Kuti ugadzire RRDTool SNMP girafu yechinhu ichi, tinya Gadzira Magirafu echigadzirwa ichi batanidza, tarisa girafu matemplate iwe aunoda kuwedzera kuongorora nekurova paGadzira bhatani kuti uendese kune rinotevera skrini, ipapo, rova ​​paGadzira bhatani zvakare kuti upedze, sezviri kuratidzwa mumifananidzo inotevera.
Kuti ugone kuona mairafu, enda kuConsole -> Management -> Midziyo, tarisa chishandiso chaunoda kuenderera mberi nekuita uye sarudza Isa paMuti (Default Muti) kubva pane yekuita menyu.
On the new screen, siya iyo Destination Branch seyakagadzika uye warova kuenderera Bhatani kuti upedze maitiro, sekutsanangurwa kuri pazasi mufananidzo.
Chekupedzisira, kuitira kuti Cacti poller itange kuunganidza data nezvekutarisa matanho, unofanirwa kuwedzera basa nyowani iro rinopindura michina kuburikidza neSNMP yega yega 5 maminitsi. Wedzera iyo yakarongwa basa kuve yako uye kuurawa neApache runtime mushandisi nekupa iri pasi apa rairo.
Crontab basa mutsara:
Mushure mekunge iwe wedzera iyo pooler cronjob, mirira inenge hafu yeawa kuti upe Cacti nguva yekuunganidza data uye wobva watya kune iyo Graphs tab muCacti web interface. Wedzera muti wakasarudzika uye girafu dzinounganidzwa kubva kumuchina wako wekutarisirwa dzinofanira kuratidzwa sezvinoonekwa mune ino pazasi skrini.
Parizvino, Cacti interface inogona kuwanikwa kubva kune vatengi mabhurawuza nenzira isina kuchengetedzwa kuburikidza neHTTP protocol. Yese ruzivo rwakakomba nezve zvishandiso zvako, pamwe necacti login certifiedals, inotumirwa mumavara akajeka. Kuti abate encrypt traffic pakati pevatengi browser uye Cacti web interface, buritsa iyi inotevera mirayiridzo ine midzi yakakosha kuitira kuti Apache SSL inogadziriswa.
Mushure meizvozvo, enda kuCacti web interface kuburikidza neHTTPS protocol. Nekuti Apache webhusaiti inoshandisa yega-siginecha-yega kunyorera kubatanidza, meseji yekukanganisa inofanira kuratidzwa mubrowser yako. Bvuma kukanganisa uye ikozvino unogona kuwana neCacti webhusaidhi zvakachengeteka sezvakaratidzwa mune inotevera skrini.
Ndizvo zvose! Wakaisa nekubudirira nekugadzirisa Cacti kubva kunowanikwa muDebian 9. Kune mamwe maitiro ezvetsika maererano neCacti, shanyira mapeji ezvinyorwa pane chinotevera chinongedzo https://docs.cacti.net/manual:100
Nzira yekuona sei CentOS 7 Server yako kushandisa Cacti
Nzira yekuisa LibreNMS Monitoring Tool ne Nginx paC CentOS 7